Interactive portfolio | Creatives Online
Ny iray amin'ireo singa manan-danja indrindra hampahafantarana ny asanao dia ny portfolio-nao. Ao anatin'izany ianao dia afaka manolotra vina momba ny zavatra ataonao, ny zavatra vitanao na ny zava-bitanao. Ahoana anefa raha manolotra mpanjifa ho avy amin'ny a portfolio interactive?
Andraso, fantatrao ve ny atao hoe portfolio interactive? Ary ahoana no hanaovana izany? Raha tsy manana hevitra ianao fa nahasarika ny sain'ny maro ka te-hahafantatra bebe kokoa momba azy, dia omenay anao ny fanalahidy mba hahazoanao izany ary ahafahanao manamboatra azy ho anao. Handeha amin’izany ve isika?
1 Inona no atao hoe document interactive
2 Ahoana ny fomba hanaovana portfolio interactive
3 Hevitra Manentana ny Fanaovana Portfolio Interactive
3.1 Gazety EnduroPro
3.2 Prado Museum
Inona no atao hoe document interactive
Voalohany indrindra, tokony ho fantatrao izany Ny portfolio dia antontan-taratasy maneho ny asa vita. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ity dia karazana resume misy sary kokoa satria mamela anao tsy hilaza fotsiny izay efa niasanao, fa koa izay nataonao ho an'io mpanjifa io ary mampiseho ohatra.
Saika heverina fa ny portfolio dia natao ho an'ireo izay manolo-tena amin'ny famolavolana sary, ny zavakanto, sns. Saingy tena tsy izany tokoa. Na ny mpanoratra kopia aza dia afaka manana portfolio misy ohatra amin'ny lahatsorany.
Saingy, raha portfolio izany, inona no atao hoe portfolio interactive? koa, Ny hoe "interactive" dia satria mamela anao mitondra rohy na mihetsika amin'ny fomba iray ka, rehefa mamaky azy io ny mpamaky (eny, amin'ny solosaina, tablette na finday), dia mihetsika amin'ny hetsika sasany izy ireo. Ohatra, raha manindry izy, dia hitondra azy any amin'ny lahatsoratra manokana, na asainy handefa mailaka amin'ny adiresy mailakao.
Izany hoe, ny portfolio interactive dia antontan-taratasy an-tserasera izay anehoana ny asa miaraka amin'ny bokotra, endrika, rohy hyperlink, fiovan'ny pejy, sns. izay mahatonga azy ho manintona sy mavitrika kokoa. Izy io dia misarika ny sain'ny olona izay mahita azy, ary, amin'ny lafiny iray, ny fahatsapana voalohany amin'ny zavatra ataon'io olona io. Manome ny fahatsapana ianao fa miraharaha ny fanolorana topimaso momba ny zavatra ataonao amin'ny fomba miditra amin'ny maso.
Ahoana ny fomba hanaovana portfolio interactive
Amin'izao fotoana izao dia azo antoka fa efa mieritreritra ny fomba fanolorana ny resume amin'izany fomba izany ianao satria mety hieritreritra ianao fa hanokatra varavarana bebe kokoa ho anao izany. Ary azo atao izany. Saingy alohan'ny hanohizanao sary an-tsaina sy hamolavola ny fomba hanaovana izany dia mila mahafantatra izany ianao iray amin'ireo programa ampiasaina amin'ny famoronana azy ny Adobe Indesign.
Mazava ho azy fa manana safidy hafa amin'izany ianao, fa ny tena miasa tsara sy mamela antsika hanao "ny zava-drehetra" dia ity.
ny dingana tsy maintsy arahinao mba hahazoana portfolio interactive Ireto manaraka ireto:
Scan ny antontan-taratasy na sary rehetra, sary, logos, sns. tianao apetraka. Zava-dehibe fa alohan'ny hidiranao amin'ny programa dia manana izay tianao hapetraka aloha ianao, ao anatin'izany ny rohy, lahatsoratra, sns. Amin'izany fomba izany dia handeha haingana kokoa sy mora kokoa ianao raha tsy manadino na inona na inona. Te hanao drafitra ve ianao? Zavatra toy izany. Soraty amin’ny taratasy na amin’ny naoty ny zavatra rehetra tianao hapetraka mba tsy hanadino na inona na inona.
Ataovy ny fonon'ny portfolio-nao. Ataovy ao an-tsaina fa izany no ho fahatsapana voalohany. Azonao atao ny mamorona collage miaraka amin'ny endrikao tsara indrindra, na zavatra mahazatra kokoa. Ny soso-kevitray? Eny, manaova roa amin'izy ireo. Amin'izany fomba izany dia afaka mamorona portfolio interactive ofisialy sy tsy ara-potoana ianao ary, miankina amin'ny asa angatahinao, azonao atao ny mandefa iray na iray hafa. Tokony ho PDF io fonony io.
Open Indesign. Sokafy ny portfolio-nao ary mandehana any amin'ny File / Adjust document. Ao amin'io fizarana io ianao dia hahita ny safidy hamoronana antontan-taratasy ho an'ny famoahana nomerika. Mazava ho azy, eto dia tsy maintsy tadidinao fa, miankina amin'ny toerana tianao hanehoana azy, dia antontan-taratasy hafa izany. Mamela anao izany mamorona portfolio amin'ny iPhone, Kindle, Android 10, iPad ... Farany, mifidiana orientation horizontaly.
Ovay ho "Interactive for PDF" izao ny fomba fiasa. Nahoana? Eny ary, satria miaraka amin'ity fomba ity dia hahita tontonana bokotra, endrika, fifindrana pejy, rohy hyperlinks, sns. Aiza? Eo an-tampon'ny havanana amin'ny fandaharana.
Ny manaraka dia anjaranao ny manaporofo ny fahaizanao. Ary tsy maintsy mampiasa ny bokotra, rohy, endrika, sns. hanome "fiainana" ho an'ny portfolio-nao. Ohatra, raha manana sary nalainao ianao, ary fantatrao fa navoaka izy ireo, dia azonao atao ny mametraka rohy mankany amin'io tranonkala io, na amin'ny fanehoan-kevitra. Safidy iray hafa dia ny mizara ny portfolio ho fizarana ary manana pejy ifanakalozan-kevitra izay ahafahanao mitondra azy mivantana amin'ny santionan'io fizarana manokana io amin'ny alalan'ny bokotra.
Tsy tsara raha mahavoky be loatra ianao amin'ny resaka bokotra sy hetsika hafa ao amin'ny antontan-taratasy. Toy izany koa no hitranga amin'ny vokatry ny tetezamita.
Rehefa vita ianao dia afaka mahita ny SWF preview mba hahitana raha tianao ny vokatra. Raha tsy izany dia kitiho mandra-pahafa-po.
Vitanao? Avy eo dia mila mitahiry azy ho PDF interactive ianao (amin'ny endrika hafa dia ho very ny asa rehetra nataonao).
Ny hany sisa tavela dia ny fampiasana azy.
Hevitra Manentana ny Fanaovana Portfolio Interactive
Tokony ho tena zava-misy ianao, impiry ianao no nahita portfolio-n'ny interactive? Sa PDF interactive? Na dia eo aza ny zava-misy fa PDF efa nisy nandritra ny taona maro, ary mampiasa azy io matetika izahay, dia tsy dia mahazatra loatra ny mahita iray. Izany no mahasarika ny sain'ny maro.
Nahita ny sasany izahay hevitra PDF interactive izay azonao jerena, ary izany dia hanampy anao hahita ny antony tena manaitra sy mety ho tany am-boalohany ny fanolorana ny filatsahan-kofidianao, na ny fananana portfolio interactive fotsiny izay miavaka amin'ny fifaninanana.
Ity gazety ity, maimaim-poana ary azo alaina amin'ny Android sy iOS, dia mampiasa endrika PDF interactive. Mila mijery azy fotsiny ianao vao mahatsapa izany.
Zavatra "andro isan'andro", toy ny fitsidihana tranombakoka. koa, ao amin'ny tranokalan'ny Prado Museum dia manana portfolio interactive izy ireo manana lanja lehibe, fa manolotra anao antontan-taratasy izay misarika ny saina.
Mety ho afaka mahita portfolios ifanakalozan-kevitra bebe kokoa amin'ny Internet ianao, saingy tsy ampy hanilihana ilay hevitra. Tsy maintsy mandeha fotsiny ianao izao, mitadiava fampianarana video izay manohana izay nolazainay taminao ary makà ora vitsivitsy amin'ny fotoananao hamoronana iray. Ny voalohany dia haharitra ela, fa ho hitanao fa mendrika ny vokatra. Ary ambonin'ny zavatra rehetra, ny fahatsapana omenao ny hafa. Efa nanao portfolio interactive ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Portofolio interactive
Ahoana ny fanovana ny sarinao amin'ny raw ho cr2